गजल | BARDIYA ONLINE |
छातीभित्र सेती बोकेर चिन्तित हुन सकेन । नदी अंगाले पनि वगर स्खलित हुन सकेन । खुलेहाम नाङ्गियौ चर्चा बटुल्न सरम बेचेर, त्यो नग्न तस्वीर धेरैबेर चर्चित हुन सकेन । इज्जतको व्यापार गर्न भनेर सहर पसेको, त्यो इन्सान त्यो पेशा सम्मानित हुन सकेन । त्यो दुश्मनीको रहस्य आखिर के हुन सक्छ, मर्दा सम्म कुकुर र बिरालो मित हुन सकेन । तिम्ले छुदा असर त मलाई पनि भएको हो, पत्थर हु पानी जसरी [पूरा पढ्नुहोस्]
हरी प्रकाश भण्डारीका दुई गजल
– हरी प्रकाश भण्डारी, बर्दिया। १. सामर्थ्य कोसंग छ चुनौती सामना गर्ने ? यहाँ दुनियाँ छ यो फुल टिप्न चाहना गर्ने। सोचेकै थिएन आज गला दबाउला भन्ने, तिनै हातहरु थिए मेरा लागि प्राथना गर्ने। नझुकौ टाउको काटिन्छ झुकौ भने खुट्टा, यस्तो अन्धो कानुन कसरी पालना गर्ने।। तुरुन्तै सफलता चाहिएको छ सबैलाई, कसैको मन छैन निरन्तर साधना गर्ने। आउ मलाई सपनामा यातना दिएर जाउ, मै हुँ सधै तिमिसंगै [पूरा पढ्नुहोस्]
[गजल] जिउँदो फर्किन्छु फर्किन्न म आफ्नै आँगनीमा !
-श्यामश्वेत पाठ्यक्रम पढाईयोस् सरकार अब अरबीमा । जवान चाहिएको छ अझैपनी लाखौँ खाडीमा । हरकोही एक परदेशिले जहाज चढ्दा सोच्छ, जिउँदो फर्किन्छु फर्किन्न म आफ्नै आँगनीमा। बाउ दिनरात ५५° घाम यसकारण सहिरहेछ, छोरो कहिल्यै आउनु नपरोस यो मरुभूमिमा! आफ्नै छोरो बाआमा आश्रम छोडेर जान्छ बाआमा सोच्छन यो बानी नसरोस नातिमा! अरबै कमाएर केभो कात्रोमा खल्ती हुँदैन यहि लिएको यहि छोड्नु पर्छ [पूरा पढ्नुहोस्]
-गीता स्मृति कठायत, दिपायल, डोटी । कसैको जबरजस्ति थिएन कसैको कर लागेन। पति मरेदेखि रातो कालो लाउने रहर लागेन । जिउन मुस्किल बनाउने एक त समाज थियो, विधुवालाई आफ्नै जवानीको नि भर लागेन । सबैले हानेका ढुङ्गाको पर्खाल बनाएको थिएँ, मलाई तपाईले हिर्काउनु भएको पत्थर लागेन। प्यार र प्यार गर्नेसित मलाई बहुत डर लाग्छ, थप्पड र थप्पड हान्नेसित कहिल्यै डर लागेन। सराबीको छेउमा बसेर हो छोरो [पूरा पढ्नुहोस्]
गजलकार प्रकाश पौडेलका दुई गजल
के दिउँ उपहार तिमीलाई ?
सुशिल राजवंशी के दिउँ उपहार तिमीलाई आफै गरीब छ यो निर्मोही? कैले हसाउने कैले रुवाउने अली अजिब छ यो निर्मोही । दिन केहि सकेन नरीसाउनु है सानु, तिम्रै दिलको मझेरीको करीब छ यो निर्मोही । गरेको छु चोखो माया गर्ने छु सधै भरि, न सोच्नु नानाथरी सार्है सरीफ छ यो निर्मोही । हाल: कुवेत बाँसगढी ८, बाँसगढि, [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल : नारा खाएर जनता बाँच्छन्, नारा नै सबथोक …
गुरुप्रसाद कुमाल ‘बुलबुल’ झुसिलकिरा कसरी बन्यो पुतली म साेच्दैछु । त्यो परजीवी कसरी बन्यो सुन्दरी म साेच्दैछु । लाइदिनेछु स्वस्तिक छाप, जाबाे त्याे छाप त हाे, चामल दिए चलिहाल्छ नि, जिन्दगी म साेच्दैछु । नारा खाएर जनता बाँच्छन्, नारा नै सबथोक, नारा सुनेरै सबैकाे चल्छ ढुक्ढुकी म साेच्दैछु । जात, धर्मका मन्द ती विष खुवाइ सुताए छन्, जुरुक्क जाग्ने बनाइहालुँ ओखती म साेच्दैछु । [पूरा पढ्नुहोस्]
प्रकाश पौडेल गजल: तिम्रो यादहरुको धन बनाएर । बाँचेको छु पत्थरको मन बनाएर । पठाउनु उपहार मलाई भन्छे- ईश्वरको पनि धड्कन बनाएर । रुपकै आधारमा भेदभाव गर्ने, मान्छेले चलाउछ चलन बनाएर। यार अचेल बारम्बार भन्छेउ, जलाउछ दिल जलन बनाएर। प्रकाशले मनमुटुमा राखेको छ, प्रेमको चिनारी कफन बनाएर। -गुलरिया [पूरा पढ्नुहोस्]
अमृत ढकाल निर्जन तिम्रो व्यबहार देख्दा कुरा सुन्दा त कागजको रहेछ । लाग्छ त्यो चट्टान , त्यो ढुङ्गा त कागजको रहेछ । तिमीले जिन्दगीको सफर तर्नु भनेर दिएकी थियौ, त्यो विश्वासको डुङ्गा त कागजको रहेछ । मैले त साँच्चै फूल ठानेँ र सुगन्ध खोजेँ, बिडम्बना त्यो थुङ्गा त कागजको रहेछ । जस्लाई उडेको देखेर सुनौलो यात्राको तय गरेथेँ, रहेछ त्यो केवल चङ्गा त कागजको रहेछ । [पूरा पढ्नुहोस्]
– सौगात श्रेष्ठ, बर्दिया । चाहिँदैन केही अरु मलाई, तिमी आए पुग्छ ।। हरेकपल आफ्नो पनको, सामिप्यता पाए पुग्छ ।। तिम्रो स्पर्शले यी फूलहरु फूल जस्तै भए, मलाई म बनाउन, तिमी मुस्कुराए पुग्छ ।। तिमीलाई म मेरो मनको राजधानीमै सजाउँला, तिमीले त केवल मलाई, आफ्नो बनाए पुग्छ ।। प्यारो मान्छे, म तिमी भित्र आफु खोजी रहेछु, तिमीले मलाई ती, नजरबाट नखसाए पुग्छ ।। तिम्रो आगमन संगै सौगात, सौगात नरहला, [पूरा पढ्नुहोस्]